Iimpawu ze-8 zokuvuvukala kwi-urethra. – Noor Health Life
Iimpawu ze-8 zokuvuvukala kwi-urethra.
Ukudumba kwe-urethra sisifo esibuhlungu kakhulu abantu abaninzi abathandabuza ukuthetha ngaso.
Kodwa ngaba ubusazi ukuba iimpawu zokudumba okanye i-UTI zicace gca kwaye zihlala zibonwa kwangaphambi kokuqala kwesi sifo?
INoor Health Life ithi iimpawu zokudumba ziyabonakala kodwa abantu abaninzi abazihoyi.
Nangona kunjalo, ukuba ufuna ukufumanisa isifo se-urinary tract, kufuneka ukhumbule ezi mpawu.
Ukuvuvukala kwe-urethra kulula ukuyiphepha
Khupha ukuchama ngalo lonke ixesha
Olu luphawu oluxhaphakileyo lwe-UTI apho uziva ufuna ukuchama ngalo lonke ixesha, nokuba usanda kudlula kwigumbi lokuhlambela, unokuziva ungxamisekile kulo mba okt hamba ngokukhawuleza.Kuyimfuneko njl.
Ukuchama okuncinci kakhulu
Xa usiya kwindawo yokuhlambela awufane uchame, uziva ngathi kufuneka wenze ngakumbi kodwa awukwazi ukwenza oko nangona usenza imizamo okanye awonelisekanga.
Ukuya kwindawo yokuhlamba ngexesha lesi sigulo kunokukwenza uzive unomsindo, unokuziva ukuba lo msebenzi ubuhlungu kakhulu, ukongezelela kunokubakho intlungu, kuzo zombini iimeko luphawu lokuphazamiseka.
I-UTIs ihlala ibangela igazi kumchamo, kodwa kungekhona kuwo wonke umntu, njengoko inokuthi ibonakale ingaboni.
Ivumba lokuchama libi kakhulu ngenxa yalo naluphi na uhlobo losulelo lwesinyi.Ukuba nawe ufumana naziphi na iimpawu zomoya onukayo, inokuba yi-UTI.. Jonga kwaye uvavanywe ngokwemiyalelo yakhe.
Izizathu eziqhelekileyo zokudumba kwendlela yomchamo
Umbala womchamo unokuxela okuninzi, kubandakanywa usulelo lomgudu womchamo. Ukuba lo mbala uyinto enye ngaphandle komthubi okanye obala, luphawu lokukhathazeka. Ubomvu okanye omdaka luphawu losulelo, kodwa qala ujonge ukuba awukhange utye nakuphi na ukutya okupinki, orenji okanye okubomvu ngombala.
Ukudumba kwendlela yomchamo kubangelwa kukosuleleka kwesinyi.Kuyo nayiphi na imeko, ngenxa yosulelo, xa umzimba uqonda ukuba kukho undonakele, uqalisa ukudumba.Ngamanyathelo okukhusela ezo seli zegazi ezimhlophe azibandakanyi; okukhokelela kwimvakalelo yokudinwa.
Umkhuhlane, phakathi kwezinye iimpawu, udla ngokubonisa ukwanda kobunzima bokuvuvukala kwindlela yomchamo kunye nokusasazeka kosulelo kwizintso. Ukuba unomkhuhlane ongaphezulu kwe-101 Fahrenheit okanye uziva ugodola okanye umzimba wakho umanziswe kukubila ngelixa ulele ebusuku, kufuneka ufune uncedo lwezonyango ngoko nangoko.
Ukudumba kwe-urethra sisifo esibuhlungu kakhulu kwaye abantu abaninzi bayathandabuza ukuthetha ngaso.
Kukwakho umngcipheko wokosuleleka kwezintso ngenxa yolusulelo okanye ukudumba kwaye iimpawu zalo zidla ngokuvela ngendlela yokutshisa kakhulu kunye neentlungu kumchamo, ngelixa urhalela ukuchama rhoqo, ukujika kombala.Kwaye kunokubakho umkhuhlane, onyukayo. kwiimeko ezinzima.
Ukopha kunye nomchamo onuka kakubi nazo ziimpawu.
Ukuba asinyangwa okanye singafunyaniswanga, esi sifo sinokusasazeka ukusuka kwisinyi ukuya kwizintso kwaye sibangele ukudumba kwezintso, okunokubulala.
Ngendlela, kukho ezinye izizathu ekunzima ukuzilawula, njengokuguga, abafazi basengozini enkulu kunamadoda, ukukhulelwa, amatye ezintso, isifo sikashukela kunye nesifo se-Alzheimer, njl.
Kodwa kukwakho nemikhwa yokuphila eyandisa umngcipheko wesifo.
Musa ukukhathalela ukucoceka
Enyanisweni, ukucoceka kakubi kunokukhokelela ekwandeni kwenani lale bhaktheriya, nto leyo eyandisa umngcipheko wokuvuvukala kwendlela yomchamo.
Sela amanzi amancinci
Uphononongo olwenziwe nguNoor Health Life lwafumanisa ukuba umkhwa wokusela amanzi amaninzi unciphisa umngcipheko wokudumba komchamo, ngakumbi kwabasetyhini. Ngokophando, eyona ndlela ilula nekhuselekileyo yokuphepha esi sifo sibuhlungu kukuthintela usulelo kwaye ukusela ilitha enye yamanzi ngaphezu kwesiqhelo kunceda ukuthintela esi sifo. Ngokophando, abasetyhini banomngcipheko ophezulu wesi sifo kunamadoda, kodwa amadoda nawo kufuneka athathe le miqathango. Uthe ukusela amanzi amaninzi kwenza kube lula ukukhupha iintsholongwane eziqokelelana esinyini kwaye aziqokeleli nto leyo edala esi sifo.
Sebenzisa iimpahla eziqinileyo
Ukusetyenziswa rhoqo kweempahla eziqinileyo kunokukhokelela kwizifo ezibuhlungu ezifana nokuvuvukala okanye ukusuleleka kwi-urinary tract Ukusetyenziswa kwempahla kwandisa umngcipheko wokuvuvukala kwe-urethra.
Ngenxa yomsebenzi othile noba utshiphu okanye siyintoni isizathu, umntu ngamnye kuthi ngumntu oyeka ukuchama kwaye ayonto imbi kodwa ngaphandle kokuba siqale siyenze kakhulu okanye singene kulo mkhuba.. Make up Ukuba umkhwa onjalo usekwa, unokukhokelela kwiingxaki ezinzulu kakhulu. Ukwenjenjalo kwandisa ukukhula kweebhaktheriya eziyingozi, nto leyo eyandisa ingozi yokudumba kwendlela yomchamo.
Kukho indlela ekhethekileyo yeyeast (VCUG) yokulinganisa uxinzelelo olungaphakathi kwisinyi kunye ne-urethra ngexesha lokuchama eya kubonisa ukusebenzisa ii-x-reyi ukuba kwenzekani xa usana lwakho luchama.
Inkqubo yomchamo (owesifazane)
I-VCUG imele “ukwandiswa kwe-cysto-retrogram”) okuthetha ukuchama. “Cysto” yeyesinyi. “I-Urethro” yenzelwe urethra, ityhubhu ekhupha umchamo kwisinyi. “Igram” ithetha umfanekiso. Ngoko ke, i-VCUG ngumfanekiso wokukhupha umchamo kwi-bladder ngokusebenzisa i-urethra.
Uvavanyo lusebenzisa uhlobo olukhethekileyo lokufuma okubizwa ngokuba yi-distration medium ukubonisa ngcono umchamo kwi-X-reyi.
Lungela umntwana wakho uvavanyo
Thatha ixesha lokufunda olu lwazi ngononophelo kwaye ulucacisele umntwana wakho. Abantwana abakwaziyo oko bakulindeleyo abafane babe nexhala. Xelela umntwana wakho ngovavanyo ngamazwi awaqondayo, kunye namagama asetyenziswa lusapho lwakho ukuqonda indlela umzimba osebenza ngayo.
Njengenxalenye yovavanyo, ityhubhu encinane ebizwa ngokuba yicatheter iya kufakwa kwi-urethra yosana lwakho. Kuya kuba buhlungu ukufaka i-catheter. Kodwa ukuba umntwana wakho uhlala ezolile, kuya kuba lula ukunxiba. Unokumfundisa umntwana wakho ukuba azole ngokuphefumlela phezulu. Cela umntwana wakho ukuba akope amakhandlela omhla wokuzalwa, avuthele iibhaluni okanye akhulule amaqamza. Yenza lo msebenzi wokuphefumla ekhaya phambi kokuba uze esibhedlele.
Abakwishumi elivisayo ngamanye amaxesha bazisa into ekhululekile ukuba bayibambe ngexesha lovavanyo. Umntwana wakho unokuzisa into yokudlala yomqhaphu okanye ingubo ekhaya.
Omnye wabazali unokuba nomntwana nangaliphi na ixesha ngexesha lovavanyo. Ukuba ukhulelwe, unokuhlala kwigumbi de kufakwe i-catheter. Kodwa kufuneka ulishiye igumbi ngexesha leX-reyi yomntwana.
Kufuneka uxelele umntwana wakho ukuba ugqirha okanye iteknoloji inokuchukumisa iindawo zakhe zangasese ukuze zihlambuluke kwaye zifake iibhubhu kuzo. Xelela umntwana wakho ukuba umvumele ukuba achukumise kuba uvavanyo luya kunceda.
Uvavanyo luya kwenziwa ngoochwephesha ababini
Iingcali zetekhnoloji zisebenza ngokukhethekileyo kwi-catheter implants kunye ne-X-rays. Ngamanye amaxesha i-radiologist kufuneka ibe kwigumbi ngexesha lovavanyo. Ingcali ngemitha ifunda iiX-reyi.
Inkqubo yomchamo (indoda)
Uchwephesha weX-reyi uya kumlungiselela umntwana wakho uvavanyo ngokumxelela oko kuya kwenzeka ngelo xesha. I-radiologist iya kucoca indawo apho incanca yomntwana wakho okanye i-urethra iya khona. I-teknoloji iya kuthi ke ifake ityhubhu eguquguqukayo kwindawo evulekileyo. Icatheter yityhubhu ende, ebhityileyo, ethambileyo, egudileyo edlula kwi-urethra iye esinyini. Iingcali zetekhnoloji ziyakucacisa oku ngalo lonke ixesha, njengoko besenza.
Ukuba umntwana wakho unentliziyo
Umntwana wakho unokufuna ukuthatha i-antibiotics phambi kokuba enze naluphi na uvavanyo. Ngokomzekelo, abantwana abanesifo sentliziyo kufuneka bathathe amayeza okubulala iintsholongwane ngaphambi kokuba baye kugqirha wamazinyo. Isibulali-zintsholongwane liyeza elibulala usulelo. Ukuba umntwana wakho ufuna eli yeza, nceda uxelele ugqirha omisela i-VCUG kumntwana wakho. Ugqirha uya kufumana eli yeza phambi kokuba anike umntwana wakho iVCUG.
IiVCUG zidla ngokuqhutyelwa esibhedlele
Uxinzelelo olungaphakathi kwi-bladder kunye ne-urethra ngexesha lokuchama lufunyenwe liSebe le-Diagnostic Imaging. Idla ngokubizwa ngokuba lisebe leX-reyi. Ukuba awuyazi indawo yeli sebe, fumana kwindawo yolwamkelo oluphambili.
Olu hlolo luthatha imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30. Emva kovavanyo kuya kufuneka uhlale kule ndawo malunga nemizuzu eyi-15 de imizobo ilungile.
Xa ungena kwiSebe leMifanekiso yoDiagnostic, umntwana wakho uya kufakwa kwigumbi lokutshintshela elinye, enxibe ilokhwe yasesibhedlele. Emva koko umntwana wakho uya kusiwa kwigumbi leX-reyi. Ngumzali omnye kuphela oya kukwazi ukuhamba nomntwana.
Emva kokuba wena nosana lwakho nikwigumbi leX-reyi, itekhnoloji iya kukucela ukuba ukhulule idiaper yempahla yangaphantsi yomntwana wakho. Emva koko umntwana wakho uya kulala phantsi kwitafile ye-X-ray. Ibhandeji elikhuselayo linokufakwa kwisisu okanye emilenzeni yosana lwakho ukuqinisekisa ukuba usana lwakho lukhuselekile.
Ikhamera esetafileni iya kuthatha imifanekiso. Ingcali yetekhnoloji iya kusebenzisa isikrini sikamabonwakude ukubona okwenzekayo ngexesha lovavanyo.
Xa iteknoloji isenza iiX-reyi, umntwana wakho kufuneka athule kangangoko ukuze afumane ezona ziphumo zibalaseleyo. Unokubamba izandla zomntwana wakho kancinci ukuya esifubeni sakho ukuze ukwazi ukuphazamisa umntwana kulo naliphi na icala. Umzekelo, unokucula umbongo okanye ingoma.
I-X-ray technologist iya kuqalisa uvavanyo ngokucoca iindawo ezifihlakeleyo zomntwana wakho kwaye ifake ityhubhu. I-catheter iya kukhupha isinyi ngokwayo.
I-catheter iya kuthi ifakwe kwibhotile enesixhobo sokuchasana. Lo mahluko uya kuhamba ngetyhubhu ephakathi ukuya kwisinyi. Oku kuya kuvumela itekhnoloji ukuba ibone ngcono ngaphakathi kwesinyi kunye ne-urethra. Umntwana wakho uya kukwazi ukuva umahluko njengoko edlula kwisinyi. Isenokubanda kodwa ayizukuba buhlungu.
Itekhnoloji ye-X-reyi iyakuthatha ii-X-reyi xa umlinganiselo wokuchasa uqukuqela ngaphakathi kwisinyi. Xa isinyi somntwana wakho sigcwele, umntwana wakho uya kucelwa ukuba achamele epanini yokulala okanye kwidiaper. I-catheter iya kuphuma ngokulula nje ukuba umntwana wakho achama. Ingcali yetekhnoloji iya kuthatha iiX-reyi ngelixa umntwana wakho echama. Le yeyona mifanekiso ibalulekileyo yovavanyo.
Iingcali ze-X-ray ziya kukuxelela indlela yokufika kwigumbi lokutshintsha ukuze umntwana abeke iimpahla zakhe. Emva koko uhlala kwigumbi lokulinda. Emva kokujonga imizobo ye-X-ray, i-teknoloji iya kukuxelela xa unokuhamba.
Ukuba unedinga lokubonana nogqirha ekliniki emva kovavanyo, xelela iteknoloji. Baya kuqinisekisa ukuba iziphumo zakho zithunyelwa ekliniki. Ukuba awumboni ugqirha emva kovavanyo, iziphumo ziya kuthunyelwa kugqirha womntwana wakho phakathi kweveki.
Nika umntwana wakho ulwelo oluninzi ekhaya
Ngexesha elithile emva kovavanyo, umntwana wakho unokuziva engonwabanga, njengokutshisa xa uchama. Nika umntwana wakho iziselo ezininzi zokusela ngosuku olulandelayo okanye ezimbini, njengamanzi okanye isiselo seapile. Ukusela utywala kuya kumnceda umntwana wakho ukuba uneengxaki.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga nemiphumo ye-QuoteTest, nceda ukhangele kwi-Technologist. Ukuba umntwana wakho akaphumli ngaphezu kweeyure ezingama-24, fowunela ugqirha wosapho lwakho.
(VCUG) luvavanyo olusebenzisa ii-x-reyi ukufumanisa ukuba kwenzeka ntoni na xa usana lwakho luchama.
Ngexesha lovavanyo, umntwana uya kuba ne-urethra efakwe kwi-urethra yakhe.
Uvavanyo lunokuba buhlungu. Unokwenza umntwana wakho aphumle kangangoko kunokwenzeka ekhaya phambi kovavanyo, njengemithambo yokuphumla. Ungaqhagamshelana Noor Health Life nge-imeyile kunye ne-WhatsApp ngemibuzo engaphezulu kunye neempendulo. noormedlife@gmail.com